Eeg sida ay yihiin midabada cusub ee Apple Watch Sport | Wararka IPhone
Muhiim Arbacadii la soo dhaafay waxay ka tagtay war weyn oo ku saabsan muuqaalka alaabta Apple, iyada oo tiro yar oo qalab cusub oo diyaar u ah in la dhigo Ma ahayn dhacdo si gaar ah isha loogu hayo Apple Watch, Midkii looga hadlay ad nauseam bilihii la soo dhaafay, si kastaba ha noqotee, sidoo kale way joogtay.
Tan iyo markii la iibiyey dalalkii ugu horreeyey Febraayo ee la soo dhaafay, sida kaliya ee lagu awoodo in la xidho a Apple Watch dahab ama dahab dahab u kacay wuxuu ahaa inuu iibsado nooc kasta oo ka mid ah noocyada nooca Edition. Caadi ahaan, qaabkani kuma jiro meel ay gaari karaan dhammaan jeebadaha, sidaas darteed kuwa ka socda Cupertino waxay go'aansadeen inay soo saaraan noocyo cusub oo ah nooca Sport ee leh midabadan.
Tan iyo arbacadii la soo dhaafay labadan midab ayaa hadda sidoo kale lagu heli karaa nooca aluminium saacadda shirkadda, labadaba dukaamada jirka iyo internetka. Saacadaha ayaa sidoo kale la imaan doona xargaha cusub, oo ka tagaya sawirka sida soo socota:
38mm wuxuu kacay dahab leh suunka isboortiga
42mm ayaa kacay dahab leh suunka dhagxaanta dhagxaanta
38mm dahab ah oo leh koox isboorti oo cadaan ah
42mm dahab ah oo leh koox buluug ah oo isboorti saqda dhexe ah
Fiidiyowga kor ku xusan waxaan si sax ah u arki karnaa waxa labadan midab ay u eg yihiin noocyadooda kala ah 42-milimitir. Cusboonaysiintaan Apple ayaa ku talo jirta, inaad haysato iPhone aad haysato, waxaad ku haysan kartaa saacad sanduuqa ku habboon (Waxaan xasuusnaa in iPhone 6s sidoo kale ku yimaado dahab dahab ah). Adiguna, miyaad ka iibsan doontaa Apple Watch labada midab ee cusub midkood?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Ka eeg Apple Watches Sport Gold iyo Rose Gold muuqaalkan
IPhone 6s Plus ayaa gabaabsi ah, rarka waa la daahiyay